Kenya oo Taageersan mid kamid ah Musharixiinta Madaxweyne si uu ugu fududeeyo Ujeedooyin ay leedahay (Xog Rasmi ah) - iftineducation.com
aadan21 / August 30, 2012
iftineducation.com – Waxaa soo baxaya Warar ku aadan in Dowlada Kenya ay gadaal ka riixeeso ayna la dooneyso Jagada Madaxweyne ee Soomaaliya mid kamid ahMusharixiinta u taagan Doorashada Madaxweyne kana mid ahaa masuuliyiintii Dowlada ee xiligeeda dhamaaday.
Kenya ayaa sida Xog aan ku helnay waxa ay taageerasysaa Raizul Wasaarihii Waqtigiisa Dhamaaday ee Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas kaa ay ka doonayaan hadii uu Xilkaasi ku guuleesto in uu u fududeeyo heshiiska Dhinaca Badda Soomaaliya qeybo badan oo kamid ah kula wareegto.
Dowlada Kenya ayaa shalay si Deg deg ah Magaalada Nairobi uga yeertay Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hada ku fashilmay ka qeyb galka Doorashada Madxaweyne ee Soomaaliya.
Xogaha aan helany ayaa sheegaya in Masuuliyiin sare oo Kenyan ah kulamo la qaateen Shariif Xasan Sheekh Aadan kuwa kalana u harsanyihiin ,waxa ayna doonayaan in ay ku qanciyaan in Codadka taageersan ee Baarlamaanka ku dhax leeyahay uu ku wareejiyo C/Wali Gaas si uu ugu guuleesto Jagada Madaxweyne.
M,asuuliyiinta Dowlada Kenya ayaana Shariif Xasan ku qancineysa in lacago badan siineyso sidoo kale Xil Wasiirnimo uu ku qanco ka heli doono Dowlada Cusub hadii uu codkiisa Siiyo Cabdi Wali Gaas uuna kusoo baxo Jagada Madaxweyne ee Soomaaliya.
Wali macada in labada Dhinac ee Heshiiskaasi isku afgarteen iyo inkale hasa ahataee waxaa ay u muuqataa in Shariif Xasan aan Soomaalinimo looga baran ku qancino doono Codsiga Kenya codkana uu siin doono Saaxiibkiis Hore Cabdi Wali gaas si Kenya marka Dowlada dhalato ee Heshiis kula wareegto qeybo kamid ah Badda Soomaaliya ay mudo u hanqal taageysay.
Baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa kal hore hor istaag ku sameeyay Heshiis ay Kenya kudooneysay in ay kula wareegto Qeybo kamid ah Badda Soomaaliya si ay uga macaashto shirakdo ajaaniib ahna ugu wareejiso Qeyraadka Badda Soomaaliyeed ka buuxa.
lama oga in Baarlamaankaan Cusub oo u Badan aqoonyahano iyo dad wanaagsan in ay ka hor tagi doonaan Qorshaha Boobka ah ee Dowlada Kenya wadato iyo in ay noqdaan kuwa Caado qaatayaal ah oo u fududeeya Kenya Boobak ay ku heeso Soomaaliya.
xigasho : allbanaadir